Mampiseho ny fanagadrana ireo Japoney taorian’ny Ady Lehibe Faharoa ny teatira Tashkent · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 20 Novambra 2019 5:48 GMT
Vakio amin'ny teny Français, srpski, Español, русский, Ўзбекча, Italiano, Ελληνικά, English
Teatira Navoi ao Tashkent, Uzbekistan tamin'ny taona 2019. Sarin'i Filip Noubel.
Mampiseho ny fifandraisana mitohy eo amin'i Japana sy Uzbekistan ny teatira manan-tantara ao Azia Afovoany.
Nosokafana tamin'ny taona 1947, misy seza miisa 1.400 , miendrika Sovietika tatsinanana, ny Teatira Tantara An-kira sy Dihy Alisher Navoi ao Tashkent, Ozbekistan izay naorina tamin'ny ampahany noho ny asan'ireo miaramila Japoney voaheloka nafindra tany Ozbekistan taorian'ny fiafaran'ny Ady Lehibe Faharoa ny volana Aogositra 1945.
Tsy manasongadina fotsiny ny fifandraisana mitohy misy eo amin'i Azia Afovoany sy Japana ny teatira ao Tashkent fa ny zava-nitranga tamin'ireo tafika sy sivily Japoney an-tapitrisany maro izay nihitsoka nanerana an'i Azia tamin'ny fiafaran'ny Ady Lehibe Faharoa ihany koa.
Tamin'ny volana Aogositra 1945, notombanana fa nahitana miaramila Japoney, mpitantana ara-mpanjanahatany, voanjo ary mpikambana hafa ao amin'ny miaramila sy ny tafika nanani-bohitra miisa 6,6 tapitrisa teo ho eo izany hoe manodidina ny 9%-n'ny fitambaran'ny isan'ny mponina ao Japana, nanerana an'i Azia sy Oseania. Niatrika ny fanamby tamin'ny fomba niverenany nankany Japana ireo olona rehetra ireo rehefa tapitra ny ady.
Tsy ny olona rehetra no afaka hiverina any Japana avy hatrany, na tsy ho afaka mihitsy aza. Ohatra, taorian'ny nanafihan'ny Sovietika an'i Manchuria tamin'ny taona 1945 , miaramila sy sivily miisa 456.000 izay nampiasain'ny fitondrana Japoney nandritra ny ady no nentin'ny tafika Rosiana ho any amin'ny toby fiasana anterivozona manerana ny Firaisana Sovietika. Nandritra ny folo taona, nanao asa an-terivozona ireo gadra, anisan'izany ny fananganana andrin-jiro, fitrandrahana arintany ary ny fananganana tetezana sy lalana ho toy ny endrika fanonerana ny ady tany amin'ny Firaisana Sovietika.
Tamin'ireo miaramila Japoney sy sivily izay nogadrain'ny Firaisana Sovietika hanao asa an-terivozona taorian'ny fiafaran'ny ady dia tokony ho 25.000 teo ho eo no nentina nankany Uzbekistan. Ny Teatira Navoi no iray tamin'ireo tetikasan'izy ireo. Mbola hita eo ivelan'ny tranobe ny takelaka iray hahatsiarovana ny asan'izy ireo.
Takelaka eo amin'ny sisin'ny Teatira Navoi izay midera ireo teratany Japoney noterena hiasa. Saripikan'i Filip Noubel.
Niandry ampolo taonany maro ireo gadra Japoney maro vao nalefa niverina tany an-tanindrazany (引 き 揚 げ) tany Japana raha niangana tamin'ny hatsiaka henjana, ny asa manapa-damosina miampy ny sakafo zara fa misy nandritra ny taona maro. Ezaka goavana ny famerenana nody ireo miaramila Japoney miisa 6,6 tapitrisa, voanjo ary tafika hafa nibodo faritra teo aloha tamin'ny fiafaran'ny ady. Nanangana foibe handraisana ireo olona nampodiana ny governemanta Japoney tany amin'ireo seranan-tsambo malaza maromaro manerana an'i Japana, anisan'izany i Maizuru mba hiatrehana ny firohotry ny olona niverina.
Miaramila Japoney nampodiana avy any Siberia, miandry ny fidinana ny sambo tao Maizuru, Prefektioran'i Kyoto, Japana, tamin'ny taona 1946. Tao amin'ny Wikimedia, Sehatra ho an'ny Daholobe.
Tao amin'ireny foibe nandraisana ireo olona nampodiana ireny no nandraisana ireo olona niverina sy nikarakarana azy ireo mba hiverenany any amin'ireo vondrom-piarahamonina misy azy ireo. Matetika tao anatin'ny hoavy tsy fantatra tany Japana izy ireo ary nitolona mba hiarina taorian'ny ady nandravarava . Ohatra, maro ireo niverina no noahiahiana ho mpiray tsikombakomba tamin'ny Komonista rehefa avy nandany taona maro niasana an-terivozona tany amin'ny Firaisana Sovietika:
OLONA SA BIBY?
Efa ela aho no nahatsapa fa sarotra ny fiainana ho an'ireo miaramila Japoney nampodiana taorian'ny Ady Lehibe Fahartoa, saingy henjana tokoa io fandalovana tamin'ny taona 1949 io niala ny Vanim-potoana Nippon (Vanim-potoana Japoney) .
Nanome tsiny ny Komonisma ny famaranana ny lahatsoratra satria notanana tao amin'ny tobim-pamonjana Sovietika ireo olona niverina.
Ny seranan-tsambo Japoney mitoka-monina ara-jegrafika ao Maizuru, ao amin'ny Prefektioran'i Kyoto any amoron-dranomasin'i Japana no hany sisa tavela tamin'ireo foibe nandraisana ireo olona nampodiana mandra-panidiana izany tamin'ny taona 1958 taorian'ny fifaran'ny ezaka goavana tamin'ny fampodiana ireo olona. Raha atambatra dia sambo miisa 346 izay nitondra olona miisa 660.000 teo ho eo no tonga tany Maizuru teo anelanelan'ny taona 1945 sy 1958.
Fanarenana ny seranana tao amin'ny toerana nisy ny seranana teo aloha tany amin'ny Birao Fanampiana ireo Nampodiana ao Maizuru ao Taira, Prefektioran'i Kyoto, izay nandraisana ireo nody an-tanindrazana. Hita ao amin'ny helodrano ireo sisa tavela tamin'ny seranan-tsambo. Saripikan'i Nevin Thompson.
Ankehitriny, mirakitra ny tantaran'ny fanagadrana ireo olona taorian'ny ady tany amin'ny Firaisana Sovietika sy ny fampodiana an-tanindrazana ireo miaramila sy sivily Japoney ny Mozea Fahatsiarovana ny Fampodiana An-tanindrazana Maizuru ao Maizuru, Kyoto. Ahitana ny fampisehoana izay manasongadina ny fifandraisana eo amin'i Japana sy Uzbekistan izay nivoatra taty aoriana “avy amin'ny fanagadrana ho lasa fifanakalozana (ara-pirahalahiana)” (抑 留 か ら 交流 ヘ) ny zavakanto sy ny fampisehoana ao amin'ity mozea ity. Hampiantrano ny ekipan'ny Lalao nasionaly amin'ny Tolona Olaimpika any Uzbekistan i Maizuru amin'ny taona 2020.
Afisy dokambarotra momba ny fampisehoana ny fanagadrana ireo Japoney tany Uzbekistan. Saripikan'i Nevin Thompson.
Mirehareha ihany koa i Japana tamin'ny asan'ireo gadra tany Uzbekistan. Nilaza ny arsivan'ny pejin'ny tranonkalan'ny trano ara-barotra Japoney Marubeni :
Ny Teatira Navoi irery ihany sisa no tsy nihetsika rehefa nitranga ny horohoron-tany lehibe tamin'ny taona 1966 izay nanongotra ny ankamaroan'ny tranobe tao an-tanàndehibe. Mampiseho mazava ny fahaizana manao maritrano ao Japana izany.